कतारमा झुक्याएर पे’ट बो’काउने कपुर बमले गर्भवती श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट ग’रेर रातारात मुगु फरार (भिडियो सहित) – Taja Khawar
आइतबार १९ मंसिर २०७८
बोल्न नसक्ने अबस्थामा बालक फेला! नाम सहित हेर्नुस। सेयर गरौ
युवतीले आफ्नै सम्बेदनशील अङग भित्र कलम हाल्दा अडकिएपछि…
लिम्पियाधुरामा माओवादी केन्द्रको भव्य सम्मेलन सम्पन्न
माओवादीबाट एमाले छिरेका प्रभु शाहलाई केपी ओलीले किन पत्याएनन् ?
रेखालाई कुन्ती शाहीले फिल्म खेल्न जस्तो राजनिती गर्न सजिलो छैन भनेपछि दिपक राज गर्जिए, क्यामरा अगाडि आउनुस् तपाइको पसिना छुट्ने छ !
भाइटिकामा आउछु भनेका दाजु ४३ बर्ष बित्दा पनि आएनन, हङकङबाट बहिनिको रु’वा’बा’सी (भिडियो हेर्नुस)
कतारमा झुक्याएर पे’ट बो’काउने कपुर बमले गर्भवती श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट ग’रेर रातारात मुगु फरार (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ समय: १०:२१:०६
गर्भवती श्रीमती कु’ट’पि’ट गरि मुगु भागे कपुर बम, जेठी र कपूरले कुटेर रातारात भागेपछी भयो बि चल्ली,ललिताले रुँ;दै यस्तोसम्म सुनाइन, कतारमा झुक्याएर पे ट बो’काउने कपुर बमले ग’र्भ’वती श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट ग’रे’र रातारात मुगु फ’रा’र भएका छन । लतिता रुँ’दै मिडियामा आएकी छिन ।
जेठी श्रीमती र कपूरले कु’ट’पि’ट ग’रे’र रातारात मुगू फ रा र भएको भन्दै डा को छोड़ेर रोईन । केहि समय अगाडी बिदेशबाट आउँदा ७ महिनाको ग र्भ लिएर आएकी झापाकी चेलि केही समय अघि आफूलाई अ ल प त्र बनाएर मुगुका एक कपूर बम नाम गरेका युवा फ रार भएकाे बताउँदै मिडियामा आएकी थिइन ।
कतारमा हुँदा परेको मायाप्रेमले आफूलाई घरको न घाटको बनाएको बताउँदै रुँदै मिडियामा आफ्ना दुःख पोखेकी थिइन । कपूर बमको घरमा एक श्रीमती रहेकाे कुरा आफु ग र्भ व ती भएपछी मात्र थाहा पाएको बताएकी थिइन । धेरै दिनको खोजीपछि कपुर बम मुगुबाट झापा आइपुगेका थिए ।
आज कपूर र उनकी श्रीमती दुबै जना ईलाममा रहेको ससुरालीमा पुगेका थिए । आ’क्रो’शित ससुराले पुग्नेबित्तिकै झपारे । ससुराले बोल्दाबोल्दै सहन नसकेर हातसम्म हालेका थिए । उनीहरूले सुरुदेखिको सम्पुर्ण कहाँनी सुनाउँदै भ’क्का’नो छोडेर रोए । दुबै श्रीमती मिलेर बस्ने भन्दै रोएका थिए । ससुराले मध्यरातमा यस्तोसम्म गरेपछि कपुरलाई जोगाउन मुस्किल परेको थियो ।
ग’ल्ती भयो भन्दै धरधरी कपुर बम रुँ’दा दाजु पनि रोएका थिए । अन्तत: परिवारले रुँदै कपुरको जिम्मा लगाएका थिए । जेठी श्रीमतीलाई पनि झापामा नै लिएर आएका कपुर बम करिब ४ महिना बसेपछि अहिले ललितालाई कु’ट’पिट ग’रे’र रातारात मुगु भागेको भन्दै ललिताले रुँदै यस्तोसम्म सुनाईन तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँशु आउनेछ ।
Last Updated on: September 28th, 2021 at 10:21 am
१५९ पटक हेरिएको
रणबीर कपुरले आलिया भट्टको लेहेंगामा लात हानेपछि बलिउडमा हंगामा (भिडियो)